4.17.20 MCS COVID-19 Fanavaozana ara-pianakaviana – Mason City sekoly COVID-19 foibe
Nanaraka ny torolàlana nomen'ny manampahefana momba ny fahasalamam-bahoaka sy ny nijanonana ny trano ireo Ohioans – izay mamelatra ny làlany. Mamonjy aina ny fijanonana any an-trano, fa manimba ny toekarentsika koa io. Ekentsika fa ilaina ny mianatra lavitra sy ny manakatona sekoly, fa tsy tetika maharitra izany. Ny tranobe Mason City Schools dia mety tsy hisokatra amin'ny Mey. Fa rehefa misokatra indray isika, ho vonona hanao izany soa aman-tsara isika.
Watch ity video ity an'ny Superintendent Jonathan Cooper mizara fa manina anao izahay, ny fomba hitahirizantsika ny mpianatra sy ny mpiasa salama rehefa tonga ny andro hisokafan'ny tranobenay, ary ny fomba antenainay hanaja ny Kilasin'i 2020.
Ireto ambany ireto ny valin'ny fanontaniana mahazatra avy amin'ny fianakaviantsika sy ny besinimaro.
Ny Kilasin'i 2020 mbola mahazo manana diplaoma?
Ny zavatra rehetra henontsika momba ny fivorian'ny vondrona lehibe dia manampy antsika hanaiky fa ny fizarana diplaoma amin'ity taona ity ho an'ny 880 mpikambana ao amin'ny Kilasin'ny 2020 dia tsy hitovy amin'ny fizarana diplaoma taloha izay natao tao amin'ny Cintas Center Xavier University. Ny fitantananantsika ny lisea dia mamolavola drafitra sy toerana miorina amin'ny zokinay sy ny Kilasin'i 2020 ny hevitry ny fianakaviana izay ho azo antoka sy manokana.
Manana mpifanila trano amiko vaovao aho. Ahoana no fomba fisoratany anarana any am-pianarana nefa nakatona ireo trano?
Noho ny valanaretina coronavirus, niova ny fomba fisoratana anarana. Ny birao foibe fisoratana anarana dia mihidy amin'izao fotoana izao amin'ny fanendrena olona rehetra. Manohy manoratra mpianatra ho an'ny 2019-2020 taom-pianarana, sy akanin-jaza miditra 2020-2021. Ny fianakaviana dia tokony fonosana fisoratana anarana feno ary alefaso imailaka amin'izy ireo izy [email protected] na mandefa mailaka amin'i
Birao foibe Mason
Attention: fisoratana anarana
Mason, NY 45040
Ny sakafo atoandro sy ny fihenan'ny sakafo atoandro ihany ve no fandaharana fisakafoanana??
Tianay ny manampy ny fianakaviana mila izany! Ny fianakaviana dia tsy mila mahafeno fepetra hisakafoanana maimaim-poana sy mihena hanangonana sakafo maraina sy sakafo atoandro. Makà sakafo maraina sy sakafo atoandro roa amin'ny alatsinainy, ary sakafo maraina telo sy sakafo atoandro telo amin'ny Alarobia. Tsy mila manatrika fiara ny ankizy vao mahazo sakafo maimaimpoana.
– Sekoly antonony / ambaratonga voalohany Mason – 11:30AM-1:00PM
– St. Toeram-piantsonana fivarotana fivarotana Vincent de Paul Thrift – 11:30AM-12:30PM
– Sekolin'i Row Row – 11:30AM-12:30PM
Orinasa eo an-toerana – Aloavy izany Mandrosoa: Fotoana iray manan-danja tokoa ho an'ny orinasantsika eto an-toerana. The MADE CDC (Mason Deerfield Chamber Community Development Corporation, fikambanana tsy mitady tombom-barotra) dia nanomboka http://payitforwardmade.com hanohanana ireo orinasa kely Mason sy Deerfield anay. Raha iray amin'ireo orinasa kely mahavariana eto an-toerana dia nisy fiatraikany tamin'ny fiainanao tamin'ny fomba tsara, diniho ny fanomezana ho an'ny antony. Tsy misy vola dolara dia kely loatra. Aleo aloantsika amin'ny vondron'orinasa bitika kely io – dolara iray indray mandeha!
Andao aparitaho ny toe-tsaina Mason sasany! Mpianatra manao zava-kanto amin'ny naoty rehetra, Alumni, ary ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina dia asaina hanatevin-daharana ny tarika Mason Marching Band amin'ny fitendrena ny hira miady amin'ny High School William Mason! Satria tsy afaka miaraka manao ny zava-drehetra isika dieny izao, manasa ny rehetra hilalao ny zavamanenonay izahay (ao anatin'izany ny chords-nao!) na ny fandraisam-peo avy eo amin'ny lavaranganao TONIGHT, 17 aprily, amin'ny 5 PM! Kopian'ny mozika, ary rakipeo, misy ao amin'ny www.masonbands.com. Makà horonantsary na sary hizarana ny fanahinao Mason eto amin'ny Pejy Facebook Event MHS Fight Song Challenge Challenge!
Kilasy mamirapiratra an'ny 2020
Ny vanim-potoana fanatanjahantena amin'ny lisea any Ohio dia tsy mitranga noho ny valanaretina coronavirus. On Alatsinainy, 20 aprily 8:20PM, ny hazavan'ny kianjantsika dia hamirapiratra mamirapiratra hanomezam-boninahitra ny Kilasin'i William Mason High School 2020 Atleta lohataona. Diniho azafady mandrehitra jiro amin'ny lavarangana fidinao hanomezam-boninahitra ireo zokiolona manokana ireo – iza no mamiratra mazava?!
Mirary faran'ny herinandro sambatra sy salama.